Iimaphu zikaGoogle zihlaziyiwe kwaye ujongano lwendlela yokukhangela lutshintsha kancinci | IPhone iindaba
Iimephu zikaGoogle zihlaziywa kwaye ujongano lwendlela yokukhangela itshintsha
Iimephu zikaGoogle ziyaqhubeka ukuba yimephu yesalathiso kunye nenkqubo yokukhangela yabo bonke abasebenzisi, nokuba ikwi-iOS okanye i-Android. Isitshixo kukunxibelelana nenkqubo yokukhangela, esivumela ukuba sifumane ulwazi oluninzi ngokuthe ngqo kwisicelo semephu. Kwelinye icala, inkqubo yokuhamba kwayo izinzile kwaye isebenza kakuhle, eyenza ukuba, njengoko besitshilo, ukhetho lokuqala lokuhamba simahla. Namhlanje ifumene uhlaziyo olutsha lwe-iOS olutshintsha kancinane ujongano lokuhamba kwaye lubandakanya ukudityaniswa okupheleleyo no-UberMakhe sijonge.
Kwindawo yokuqala bahlaziye iscreen sokuhambisa, nangona sizakuqhubeka nokukhetha ngokufanayo, ezi ziya kuboniswa ngolwazi olongezelelekileyo kwaye ngendlela ecocekileyo kancinci. Kwelinye icala, Iya kusinika uluhlu kunye neenkonzo kunye neenketho ekufuneka siye kuzo kwindawo ekhethiweyoNgale ndlela bazimisele ukuba nawuphi na umsebenzisi weendlela zothutho okhetha iimephu zikaGoogle xa eshiya ikhaya. Ngumlinganiso wobulumko lowo, siyaneliseka zizicelo kwaye ukumanya kangangoko kunokuba sisitshixo xa kufikwa kwisicelo esithile.
Kwelinye icala, i-Uber idityaniswe ngokupheleleyo kwiimephu zikaGoogle, yiyo loo nto Singacela i-Uber, siyithathe kwaye sihambe ngokuthe ngqo kwiGoogle Maps, ngaphandle kokuphuma kwesicelo nangaliphi na ixesha. Ngapha koko, ukuba awunayo i-Uber efakwe kwiselfowuni yakho, ungangena ngqo kwiGoogle Maps kwaye wenze zonke iintshukumo ze-Uber, ezinje ngokunxibelelana nomqhubi.
Ngelixa usendleleni eya ku-Uber uza kubona lonke ulwazi lwendawo oya kuyo njengeemenyu, ixesha, uphononongo nokunye okuninzi. Ngokuqinisekileyo iimephu zikaGoogle zifuna ukuba liziko lokuhamba kwethu kude nekhaya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Iimephu zikaGoogle zihlaziywa kwaye ujongano lwendlela yokukhangela itshintsha
Ezi patent zibonisa indlela ezisebenza ngayo ii-AirPods kunye neBluetooth yazo
Yu-Gi-Oh! I-Duel Links ngoku iyafumaneka eMelika nase Canada